Ụbọchị My Pet » Mbụ amụta – Usernames
site Evan Marc Katz
Mbụ amụta – Usernames
emelitere ikpeazụ: oké osimiri. 26 2020 | 2 min agụ
On JDate, M bụ nyfunnyguy32 ruo mgbe m Switched mysterE32 n'ihi na ọ dịghị ihe doro anya kpatara. Kwuo ihe ị ga-banyere m họọrọ monikers, ma ha adịghị ụda dị mmadụ nile ọzọ. MysterE bụ a play na okwu na-eji, O doro anya na, okwu “omimi” na mbụ m mbụ. M n'ezie na-Ekele na ya site n'oge ruo n'oge. Nyfunnyguy ga-ezi aha ọ bụrụ na m bi na New York, ma, ka nwaanyị na-Los Angeles, ihe East Coast Ihọd onye na-ede ntochi bụ ezi ihe ndabere na-amalite mkparịta ụka. Ọbụna mgbe m na-otu ugboro kwuru na m na aha njirimara na a Santa Monica mmanya, “Hey, Nyfunnyguy!”, ọ nyeghachiri otu oké mkpa, ma ọ bụrụ na ihere ihe n m mgbasa ozi anọwo irè. M na obi abụọ ọ ga-kwuru “Hey, Mike1234” ma ọ bụrụ na ndị na-aha m.
Ihe dị ka usernames na akụkọ ndị a ogwu n'akụkụ a otutu online daters. Echere m, ọ dịghị onye na-eche banyere nke a stof, ka ha na-? N'ihi na ọtụtụ akụkụ, Azịza ya bụ na ọ dịghị. Ọ bụrụ na ọ bụ egregiously ọjọọ ma ọ bụ N ọzọ adịkarịghị N Wezuga ọma. A ezi aha njirimara pụrụ n'ezie na-amalite mkparịta ụka – M malitere-ekwu okwu na a BePatientImBlond n'ihi na ihe mere. M na-aka ndị ọzọ ahịa (onye ga-anọgide na-ọrụ na onye-enweghị aha), na-abụghị nanị na enwetatụbeghị ha oké nzaghachi ha na profaịlụ, ma Kudos na ha usernames nakwa.
Chọgharịa site ole na ole na iri na abuo òtù na ịgụ otú ọtụtụ usernames kwụpụta. Ọ bụghị ọtụtụ, M obi sie gị. All n'ihi na e nwere ihe ọ bụla echiche ma ọ bụ creativity ọrụ ị na-ahọrọ otu. Ma gịnị mere Itinyekwu Mgbalị? Họrọ isiokwu na-bụ ị hụrụ n'anya na. Ọ na-adịghị ga-asị na ihe niile banyere gị, ma ọ bụ n'ezie ihe ọ bụla banyere gị. Dị nnọọ ihe fun. Atụ ogho echiche na na gị isi, jide ya ka ìhè si dị iche iche akụkụ. Mee elu mee ma ọ bụ mgbe e mesịrị, ihe a na-aga gbapụta. Na ihe na-aga na-aha njirimara gị. The kasị mma ndị na-emekarị abụọ entenders ma ọ bụ na arụ orụ di na okwu; na-ewere maara na-eme ka ọ dị iche iche. Dị ka Mystery, ọmụmaatụ. Ihe ọ bụla ị na-atụ aro, e nwere a punny, ma ọ bụrụ na ọ bụghị na, azịza.
Ịgba egwú? Two2Tango.
City atụmatụ? UrbanMiff.
Oh, bịanụ! N'ezie ị na-aga detara UrbanMiff! Hell, M na-eche m agbarapụ eji na-akpọ aha onwe m.
Usernames bụ ihe ijuanya na mkpa, ọ bụghị n'ihi na ha na-dealbreakers, ma n'ihi na ha na n'ụzọ nkịtị njirimara gị na a website. Ma gịnị mere ọ ga na onye ọ bụla chọrọ ịbụ TopekaTim mgbe ọ pụrụ ịbụ JayhawksRock?
Dị ka nnọọ boldface ụdị na-eme ka ị bulie a tabloid mgbe ị na-guzo n'elu nri ọpụpụ akara, usernames nwere ike mmetụta na mkpebi gị anya n'ime. All ihe ndị fọdụrụ hà, ma ọ bụrụ na foto bụ nkezi, ị na-agwa m na ị na-agaghị na-ele anya na onye mere ka ị na-achị ọchị na-eji nanị otu akara? Iji na-emighị emi njedebe nke ọdọ mmiri ị na-aga! Ndị fọdụrụ n'ime anyị na-na-etinyecha kwurịta ụfọdụ usernames ebe a.